eNasha.com - नग्नताविरोधी अदालत
सबैभन्दा नग्नता र छाडापन अमेरिकामा नै छ । शायद नग्नता र छाडापनबाट उनीहरु वाक्क दिक्क भइसकेका छन् । त्यही भएर होला अदालतले हालैको एउटा निर्णय फ्लोरिडास्थित डेटोना समुद्र किनारमा त्यहाँका रेष्टुराँमा काम गर्ने बालाहरुले लुगा लगाउँदा धेरै कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने भनी आदेश दिएको छ ।
यहाँका उत्तेजक नृत्य गर्ने रेष्टुराँका नृत्याबालाहरुलाई नृत्य गर्नुअघि विभिन्न सेवा पुर्‍याउँदा उनीहरुले गतिलो र ग्राहकहरुलाई उत्तेजनामा नल्याउने लुगा लगाउनु पर्ने आदेश दिएको हो ।
यी बालाहरुले स्वतन्त्रताको यति विधि उपयोग गरे कि तिनले शहरभरि नै उत्तेजक लुगा लगाएर हिँड्न थाले । यसका कारण शहरै यौन प्रदूषित देखिन थाल्यो- एक शहरीले गुनासो गरे- अदालतले सही निर्णय गर्‍यो । जसका कारण यो शहरको गुमेको इज्जत केही भए पनि बच्छ कि !
गएको मार्च २३ मा डेटोना बीच र ललिपप्स जेन्टलमेन्स क्लबबीच झगडा परेपछि यो मुद्दाले प्राथमिकता पाएको थियो । ललिपप्सका तरुण युवतीहरु नग्नै रुपमा डेटोना सामुद्रिक किनारामा रमण गर्न थालेपछि डेटोना सामुद्रिक किनारको हेरचाह गर्ने संस्थाले त्यहाँको नगरपालिकासँग गुनासो गरेको थियो र उसले त्यहाँ नगरपालिकाको नग्नता कानूनको धज्जी उडिरहेको बताएको थियो ।
शहरी विभागका कानून अधिकृत बब ब्राउनले भने- "यो मुद्दाको मुख्य कुरा के हो भने, अदालतले हामीलाई हाम्रो किसिमको कानूनको सही सदुपयोग गर्न पाउनु पर्छ भनेर स्वीकृति दिइसकेको छ । अबका दिनमा डेटोना बीच वरिपरि कसैले पनि उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्न पाउने छैन । यो मनोरञ्जन उद्योगमाथिको प्रतिबन्ध होइन कि मान्छेभित्र रहेको लाज र घृणालाई बचाउने अभियान हो ।"
यसमा रोचक के थपिएको छ भने अबका दिनमा यस्ता क्लबहरुमा कुनै पनि बार बालाले नग्न रुपमा बियर र रक्सीहरु पस्किने छैन । उसले कम्तीमा बिकिनी चाहिँ लगाउनै पर्छ । यदि त्यसो नगरिएको पाइएमा क्लबले गह्रौँ जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।
त्यसो त आफूमाथि अन्याय भएको क्लबहरुले बताइरहेका छन् भने अदालतले चाहिँ सकेसम्म सक्दो लचिलो कानून बनाइदिएको दाबी गरिरहेका छन् ।
सन् २००६ को जनवरीमा क्लबहरु छाडा हुँदै गइरहेको भनी शहरी विकास आयोजनाले क्लबहरुमाथि कडाई गर्न थालेको थियो । तर क्लबहरुले उल्टै उनीहरुको बोल्ने, नृत्य गर्ने र घुमफिर गर्ने अधिकारको हनन् भएको बताएर मुद्दा हालेका थिए ।
यता ललिपपले चाहिँ एडल्ट बिजनेस एरियामा यस्तो नभए कस्तो हुन्छ त भनी उल्टै प्रश्न गरिरहेको छ । उसले यो मुद्दालाई अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याउने बताइरहेको छ ।
यस्तो पनि ! माया सुन्दरी भव्यता मूर्ख्याइँ सेलेब्रिटी इन्टरनेट बलिउड मुद्दा मामिला उदेकलाग्दो नग्नता विज्ञापन गुगल श्रीमानश्रीमती उपाय परिस्थिति फट्याइँ उदारता हलिउड प्रविधि